प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेपछी बाराबाट पक्राउ परेका मैनाली के भन्छन् ? - Birgunj Sanjalप्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेपछी बाराबाट पक्राउ परेका मैनाली के भन्छन् ? - Birgunj Sanjalप्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेपछी बाराबाट पक्राउ परेका मैनाली के भन्छन् ? - Birgunj Sanjal
प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेपछी बाराबाट पक्राउ परेका मैनाली के भन्छन् ?
५ भाद्र २०७६, बिहीबार ०३:५९
काठमाडौँ : सबैथोक ठीकसँग चलेको भए बारा जितपुरका २६ वर्षीय सागर मैनाली यतिबेला वैदेशिक रोजगारीका निम्ति मलेसिया जान सुटकेस किनिरहेका हुनेथिए वा विदेश जाँदा के के लैजाने भन्ने सूची बनाइरहेका हुनेथिए ।
कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा सागरले नेताहरूलाई गाली गर्नुको कारण बताउँदै प्रश्न गरे, ‘देशमा लोकतन्त्र आएको दशक भइसक्दा पनि किन दलहरूले केही लछारपाटो लाउन सकेनन् ? माओवादीले परिवर्तनका निम्ति दशक लामो युद्ध लडेर पनि नेपालमा किन केही भएन ? ओलीले ग्यासको पाइप ल्याउँछु भन्थे, ल्याए ? शेरबहादुर त्यति पटक प्रधानमन्त्री भए ? के गरे ?’
-कान्तिपुर दैनिकदले ‘राज्यप्रति आक्रोश पोख्दा…’ शिर्षकमा यो खाबर लेखेको छ ।